Igumbi laseMoringa-Pantai Paris Homestay-Maumere
Igumbi lakho lokulala e indlu enevaranda sinombuki zindwendwe onguPantai Paris
UPantai Paris unezimvo eziyi-98 zezinye iindawo.
Sime kufutshane nesikhululo seenqwelomoya i-MAUMERE (imizuzu emi-5) kwindawo echumileyo kanye elunxwemeni lolwandle. Igumbi lethu laseRosella linebhedi e-1 ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela elivulekileyo langaphakathi entshona. Ibandakanya isidlo sakusasa esimnandi sasimahla. Iindwendwe zinokusebenzisa ikhitshi langaphandle ukwenza ikofu/iti/ukutya. Ukurenta isithuthuthu kunye neebhayisekile.
Indawo yokuhlala phantsi kwe-NGO kwaye siyavuya ukunazisa ngemisebenzi ye-NGO (TRASH HERO Coca uLwandle, uQeqesho ezikolweni, ukuRecycling, ukuluka ngokweSintu, njl. njl.).
Sishishini lentlalo kwaye sizame ukugcina iNGO yethu isebenza ngemali evela kwindawo yokuhlala. Asifuni ukuthembela ekubolekeni imali ezibhankini okanye kwabanye, ngoko ke besisakha onke amagumbi ethu kunye nezibonelelo ngokuthe ngcembe. Kwaye ayikagqitywa :-).
Kungenxa yoko le nto uya kubona, njengoko ezinye iindwendwe zibonile, ukuba ngamanye amaxesha indawo yethu ibonakala ngathi "indawo yokwakha". Nangona kunjalo, 'ukwakha' akufanele kuphazamise intuthuzelo yakho. Sinegadi entle kodwa nalapha: inyathelo ngenyathelo :-). Amanzi aphuma equleni anetyuwa encinci ngoko, akulula kangako ukukhulisa izityalo.
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-98 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Ummelwane wethu yindawo yokutyela. Ubungcali babo yintlanzi eyosiweyo - ungakhetha enye kwaye bayoyike. Iimitha ezingama-200 kwicala elingasempuma kukho indawo yokutyela / ibha ethengisa ukutya, kodwa bafuna ixesha lokuzilungiselela. Zombini iindawo zokutyela ezinjengomculo: ummelwane waseIndonesia kunye nesiNgesi Karaoke, enye iReggae.
Umbuki zindwendwe ngu- Pantai Paris
'Sithanda' iindwendwe eziza kuhlala nathi. Ngokukodwa ukuba ubusuku obumbalwa (ukuba ubusuku obunye kuphela, akukho xesha lininzi lokunxulumana). Ukuba kukho itheko (umtshato / umthendeleko wokuqala) okanye umcimbi we-NGO (umzekelo, i-Trash Hero), sihlala sicela iindwendwe ukuba zijoyine! Kwaye bonke bayayixabisa le nto. Imisitho yamagorha eNkunkuma iqhelekile ngeCawa, amaqela, ewe, asinakuqikelela :-)
Ngokwesiqhelo kukho ixesha elininzi lokuxoxa nokuba ziyintoni na iimfuno zeendwendwe - iihambo. izithuthi, ukutya, iziselo, njl.
'Sithanda' iindwendwe eziza kuhlala nathi. Ngokukodwa ukuba ubusuku obumbalwa (ukuba ubusuku obunye kuphela, akukho xesha lininzi lokunxulumana). Ukuba kukho itheko (umtshato / umt…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sikka